Zavamaniry sinoa, zava-maniry ahitra, dite-ahitra - Drotrong
Hafatra an'ny CEO
Vokatra fitsaboana ara-pahasalamana
20 TAPITRISA+ Toeram-pambolena 20 kilaometatra toradroa
25 + 25+ traikefa amin'ny indostria
8000+ Orinasa 80000 ㎡
2000 + 20.000 taonina Output isan-taona
Nanomboka tamin'ny 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. dia nirotsaka tamin'ny fananganana vondron'orinasa ahitra sinoa, izay ao anatin'izany ny zana-ketsa ahitra, fambolena, fanodinana voalohany, fanodinana lalina, fitrandrahana raokandro ary varotra.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasanay, nanangana toby fambolena sy famokarana fototra anana ahitra izahay. Ho an'ny toha-pambolena dia manana Epimedium, Cortex Phellodendri, Polygonatum Sibiricum, Saussurea Costus sns isika, izay mihoatra ny 20 tapitrisa metatra toradroa. Ho an'ny toha-pamokarana dia manana ozinina fanodinana roa voalohany izahay ary orinasa iray fitrandrahana zavamaniry iray izay mihoatra ny 60000 metatra toradroa. Mikasa ny hanangana orinasa mpamongady raokandro vaovao sy ozinina fikarakarana ara-pahasalamana ao anatin'ny telo taona izahay.
Fambolena sy ozinina
Toeram-pambolena metatra toradroa 20 tapitrisa & orinasa 80000 ㎡
Zavamaniry sinoa bebe kokoa >>
Herim-bidy bebe kokoa >>
Tea Herbal bebe kokoa >>
Vokatra fitsaboana ara-pahasalamana bebe kokoa >>
Amin'izao fotoana izao, mandinika tsara ny fahasalamany ny olona, ​​noho izany, miha betsaka ny vokatra ara-pahasalamana ankasitrahan'ny olona. Ny akora akorandriaka dia azo antoka, voajanahary amin'ny vidiny mirary.
Fivarotana hopitaly sy fivarotana rongony
Ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa (TCM) dia endrika fitsaboana iray izay nanomboka an'arivony taona lasa izay tany Chine. Matetika antsoina hoe "TCM" ary mampiasa zava-maniry ny mpitsabo mba hisorohana na hitsaboana olana ara-pahasalamana. Ny zava-maniry sinoa Drotrong dia be mpampiasa any amin'ny hopitaly sy fivarotana zava-mahadomelina, natiora 100% tsy misy fandotoana, izay no safidy tsara indrindra amin'ny tsenanao miaraka amin'ny vidin'ny orinasa mivantana.
Ny fampiasana ny famenon-tsakafo ahitra dia mahazo vahana amin'ny famokarana biby noho ny fandrarana ny fampiasana antibiotika sasany, ny vokany sisa tavela ary ny fahombiazan'ny vidiny. Drotrong dia manana anana sy nalaina maro izay azo ampiasaina amin'ny fametahana sakafom-boankazo.
Orinasa fivarotam-panafody maro no mandray anana ahitra na fitrandrahana zavamaniry toy ny akora mahazatra. Drotrong dia manana fototra fambolena, ozinina fanodinana raokandro ary ozinina extrat. Manomboka amin'ny akora raokandro ka hatramin'ny fitrandrahana raokandro, afaka manome serivisy OEM anao izahay izay afaka mitsitsy ny fotoananao sy ny volanao.
Ankehitriny dia tototry ny tarehy kosmetika ny tsenan'ny hatsaran-tarehy. Misafidy kosmetika raokandro ny olona satria azo antoka izy ireo, tsara ho an'ny karazan-koditra rehetra ary tsy misy fiatraikany. Ny ahitra sy fitrandrahana sinoa Drotrong dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny cosmetic herbal.
Azonao atao ny manamarina ny kalitao amin'ny alàlan'ny santionany
Kitiho raha hahazoana santionany
Nanomboka ny andrana pro ...
Nanomboka ny famokarana andrana ny atrik'asa granule an'ny orinasa anay, izay midika fa ny Astragalus, forsythia, bupleurum ary fitaovana hafa tena izy dia hozaraina ho tapa-kazo sy granula manazava amin'ny tsipika famokarana ho avy ary ho any amin'ny ...
Maca dia tompon-tany tendrombohitra Andes any Amerika atsimo manana haavo 3500-4500 metatra. Any amin'ny faritra ekolojika Puno any afovoan'i Peroa sy tanàna Puno any atsimo-andrefan'i Peroa no tena zaraina. Izy io dia zavamaniry ao amin'ny karazana Lepidium meyenii ao Cruciferae. Amin'izao fotoana izao, ny lehibe ...
Ny menaka tsilo amin'ny ronono dia karazana menaka ara-pahasalamana fihinana voajanahary izay vita amin'ny menaka voa tsilo. Manana sanda ara-tsakafo avo izy io. Ny tena ilaina amin'ny menaka tsilo dia ny asidra matavy tsy miangona, izay asidra matavy tena ilaina, izany hoe asidra linoleika (atiny 45%). Ronono ...
Adiresy: NO.88 South Garden Road, Distrikan'i Gaoxin, Chengdu, Sina
Misoratra anarana hahazoana ny vaovao farany sy ny hetsika (fampiroboroboana, vokatra vaovao sns)
Ampidiro ny mailakao
Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay.